Muddo 5 Maalmood Ah Oo M/Weyne Biixi Aanu Kasoo Xaadirin Xafiiska Shaqada + Sababta - FOOLAAD MEDIA
Home » Wararka » Muddo 5 Maalmood Ah Oo M/Weyne Biixi Aanu Kasoo Xaadirin Xafiiska Shaqada + Sababta
Muddo 5 Maalmood Ah Oo M/Weyne Biixi Aanu Kasoo Xaadirin Xafiiska Shaqada + Sababta
Madaxwaynaha Jamhuuriyada Somaliland Mudane Muus Biixi Cabdi ayaa muddo shan maalmood ah ka soo xaadiran xafiiskiisa shaqada ee madaxtooyada Somaliland waxaanu Sabtidii illaa Arbacadii todobaankan ku sugnaa gurigiisa uu sidda gaarka ah u leeyahay.
Sababo kala duwan ayaa loo aanaynayaa in Mudane Muuse Biixi uu shan maalmood kaga maqnaado shaqadiisa iyo waajibaadkii uu qaranka u hayay waxaana Xogo hoose ay sheegayaan in uu ku maqnaa arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin:
Wax ka qabashadda siyaasadda arrimaha dibadda iyo tan geeska Afrika oo boqol maalmood gudahood isbadal xoogani ku yimid In uu la tashi badan la yeesho dad gaar ah oo uu bidayo talo, madaxtooyaduna ku noqotay meel aan dhuumasho siyaaasadeed lahayn.
In uu samaysto qorshe siyaasadeed ka dawan kan imika uu ku howl-galo oo bulshada shacabka Somaliland saluug ba,an ka muujiyeen.
In uu u diyaar garoobo fullinta go,aamada adag ee ka soo bixi doono Guddida gacanta ku haysa Nabadaynta Ceel-afwayn iyo Wax ka qabashada tabashadda beelaha Boorama iyo Galbeedka Burco.
Arrimahan ayaa waxaa marag u ah oo ka-hadalkeeda iyo dardargalinta siyaasada la saluugsan yahay ee arrimaha dibadda loo xil saaray wasiirka wasaaraddaasi oo ka hadlay isbadalada siyaasadda geeska afrika.
Geesta kale xogahan ayaa sheegaya in madaxwayne Biixi lagula taliyay in qorshaha uu ku darsado samaynta isku-shaan-dhayn uu ku sameeyo golahahiisa wasiiradda walow aan xogtu shaacin in uu talaabadaasi imika diyaar u yahay iyo in kale.
Tan iyo intii ka dambaysay markii la doortay Mudane Biixi waxaa jiray Cabashooyin kala duwan oo ka soo yeedhayay meelo badan bulshadda dhexdeeda ah waxaa meesha ka baxday shaqadii wasaaradda arrimaha dibada oo aan la socon duufaanada siyaasadeed ee gobolka ka socda saamayna aan ku lahayn.
Waxaa kale oo meesha ka baxday qancinta beelaha tabashada wadda oo markii hore siyaabo aan muuqan oo dowladeed loo dhamayn jiray.
Gabagabadii lama garan karo waxaa ay noqonayso natiijada talada iyo qorshaha shanta maalmood qaatay ee uu madaxtooyada kaga maqnaa Biixi iyo waxa ay noqon doonto talaabada uu qaadayo.